Mohamed Salah oo aanan xulkiisa Masar u matali doonin is reeb-reebka Koobka Adduunka & Sababta ka dambeysa oo la shaaciyay – Gool FM
(Liverpool) 24 Agoosto 2021. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa u sheegtay xiriirka kubadda cagta dalka Masar in Mohamed Salah uusan xulka qaranka dalkaas kala qayb geli doonin ciyaaraha is reeb-reebka Koobka Adduunka ee nagu soo aaddan sabab la xiriirta xannibaadaha xanuunka Korona Fayras.
Xulka Masaarida ayaa 2-da bisha September la balansan xulka Angola ciyaar ka dhici doonta magaalada Qaahira, waxaana uu saddex maalin kaddib u safri doonaa xulka Gabon, hase ahaatee, dalka Masar ayaa ku jira waddama dowladda UK ay ku dartay qadka guduudan in loo safro ama looga soo safro.
Xiriirka kubadda cagta dalka Masar ayaa bayaan rasmi ah oo ay soo saareen ku sheegeen inay warqad kaga timid naadiga Reds iyadoo dalbaneysa in Salah uusan ka qayb galin ciyaaraha xulalka Africa ay ugu soo baxayaan Koobka Adduunka 2022 sidoo kalena ay jiraan xiddigo kale oo ajaanib ah kuwaasoo ay si la mid ah Salah ka celisay inay xulalkooda aadaan.
Sababta ay Liverpool ku diidday ayaa ah in dalalka Brazil, Masar iyo Argentina ay ka mid yihiin waddammada ay dowladda Ingiriiska u aqoonsan tahaya kuwa ugu halista badan xanuunka Korona sidaas darteedna xiddigii dalkaas aada uu geli doono ugu yaraan 10 maalin oo karaantiil ah marka uu kusoo laabto dalka England taasoo keeneysa in xiddiga uu jir ahaan taam ahaan waayo ciyaaraha xiga.
Si kastaba ha ahaatee, keliya 29-sano jirkan ma ahan xiddigaha aysan fasixin Liverpool ee sidoo kale waxaa wararka qaar lagu helayaa inaysan fasixin xiddigaha Brazil ee kala ah Alisson Becker, Roberto Firnino iyo Fabinho.